Qalabka Soosaarayaasha iyo Mashiinnada Kaabayaasha ah | Shiinaha Qalabka iyo Mashiinnada Kaabayaasha Warshad & Shirkado
Khadkan biir toosan ee qasacadaysan ayaa loo isticmaalaa buuxinta biirka gasacadaha, rinser, filler iyo seamer ayaa kala qaybsan. Waxay dhameyn kartaa dhamaan howlaha sida dhaqida, buuxinta iyo daboolida.
Steam Generators waa isha ugu fiican ee uumiga buuxa ee tayo sare leh ee warshadaha yaryar, brewpubs iyo nidaamyada yaryar ee uumiga.
Nidaamka wax lagu qoqolo Malt
Nidaamka waxsoosaarka malt waxaa ka mid ah mashiinno iyo qalab kale oo loo baahan yahay si loo diyaariyo miraha malta ka hor inta aan la bilaabin soosaarka wort ee brewhouse.
Nidaamka Qoriga Hop
"Boodbood qallalan", oo sidoo kale loo yaqaan "boob-qabow" ganacsiga, waa nidaam saliidaha muhiimka ah ee qaaliga ah looga sii daayo lupulin-ka ku jira xuubka biirka. Qoob-ka-bax qallalan ayaa la sameeyaa ka dib hawsha miraha ee aagga qabow. Waqtigan xaadirka ah, biirku wuu dhammaaday laakiin weli si buuxda uma bislaanin.